ikhaya/11 Windows/Sebenzisa Windows 11 Ikhaya ngaphandle kweakhawunti yeMicrosoft
Vangelis27. Novemba 2021
Ungayifaka Windows 11 ngaphandle kweakhawunti yeMicrosoft, kodwa yinguqulelo yePro kuphela. Kwinguqulelo yasekhaya, iakhawunti yeMicrosoft isafuneka ngexesha lenkqubo yokuseta. Kukho iingenelo ezimbalwa zokuhlohla ngeakhawunti yeMicrosoft, efana nale: Umzekelo ukusetyenziswa kogcino lwamafu lwe-OneDrive kunye nezinye iinkqubo ze-intanethi, kodwa ngembuyekezo unika uMicrosoft umhla wakho. Ukuba awuyifuni loo nto, ungayifaka Windows 11 ngaphandle kweakhawunti yeMicrosoft.
Faka Windows 11 Pro ngaphandle kweakhawunti yeMicrosoft
Xa ucwangcisa Windows 11 Pro unokukhetha phakathi kweakhawunti yeMicrosoft kunye neakhawunti yasekhaya ngexesha lokuhlohla. Emva kokungena kwingingqi kunye nobeko lwebhodi yezitshixo, ungakhetha iakhawunti. Cofa ku "Iinketho zokuNgena" kwaye ukhethe "iAkhawunti eNgenamsebenzi". Ukongeza, unokwenza kwaye usebenzise iakhawunti yomsebenzisi wendawo.
Usetyenziswa njani Windows 11 Ikhaya ngaphandle kweakhawunti yeMicrosoft
Ijongeka yahlukile kancinci ngenguqulo yeKhaya leWindows. Apha kufuneka ufake inkqubo yokusebenza Iakhawunti yeMicrosoft sebenzisa. Oko kuthetha ukuba ufaka iKhaya leWindows ngeakhawunti yeMicrosoft kwaye kamva ungayisusa kwakhona xa sele wenze iakhawunti yendawo.
Emva kokuba ufake iKhaya leWindows, qalisa iWindows 11 useto. Kungcono ukusebenzisa indlela emfutshane yebhodi yezitshixo IWindows + mna.
Cofa ngasekhohlo "IiAkhawunti" kwaye uqhubeke kwifestile yasekunene “Usapho kunye nabanye abasebenzisi ".
Cofa apha ngezantsi "Abanye abasebenzisi" kwiqhosha Msgstr "Yongeza iakhawunti".
Emva koko khetha "Andizazi iziqinisekiso zalomntu".
on "Yongeza abasebenzisi ngaphandle kweakhawunti yeMicrosoft" khawuleza.
Faka igama. Ukwanalo nokukhetha ukuseta igama lokugqitha.
Nje ukuba iakhawunti entsha yomsebenzisi imiselwe, cofa utolo olusemva kweakhawunti kwaye emva koko "Uhlobo lweakhawunti".
Ngoku khetha kwi-drop-down menu "Umphathi" kwaye ucofe "KULUNGILE", ukuze utshintsho lugcinwe.
Ngoku ngena ngeakhawunti yangoku (iakhawunti yeMicrosoft) kwaye ungene ngeakhawunti entsha yomsebenzisi yasekhaya osanda kuyenza.
Emva kokuvula useto lweakhawunti, khetha "Usapho kunye nabanye abasebenzisi" ngaphandle.
Khetha iakhawunti yeMicrosoft kwaye ukhethe "Isusiwe". Cofa apha "Cima iakhawunti kunye nedatha", ukucima iakhawunti yakho yeMicrosoft.
Ngoko unako 11 Windows Ususe iakhawunti yeMicrosoft kwikhompyuter yakho kwaye ngoku usebenzisa i Iakhawunti yomsebenzisi wendawo.
Suspend Windows 11 uhlaziyo-nqumama uhlaziyo
Iakhawunti yendawo Iakhawunti yeMicrosoft 11 Windows
Imiyalezo ye-63 Ukuthandwa kwe-4
Ungayifaka Windows 11 ngaphandle kweakhawunti yeMicrosoft, kodwa yinguqulelo yePro kuphela. Kwinguqulelo yasekhaya, iakhawunti yeMicrosoft isafuneka ngexesha lokuseta. Kukho inani leenzuzo zokuhlohla ngeakhawunti yeMicrosoft, ezinje: B. ukusetyenziswa kogcino lwamafu lwe-OneDrive kunye nezinye iinkqubo ze-intanethi, kodwa ngembuyekezo unika uMicrosoft umhla wakho. Ukuba awuyifuni loo nto, unokubaleka Windows 11 ngaphandle ...